I-Teccart College - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Izinhlelo zePathwayITeccart College
Indlela yakho eya eCanadaITeccart College
I-Teccart Institute yikholeji yangasese exhaswayo enikezela ngezinhlelo ezisezingeni lokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe ezingeni lasekolishi futhi ibesebenza eQuebec iminyaka engaphezu kwamashumi ayisithupha. Amandla ayo aphambili asezingeni lobuchwepheshe obusha nobolwazi bezokuxhumana (i-NICT) kanye nemikhakha yezobuchwepheshe yezobuchwepheshe kwezobunjiniyela bezimboni. Lezi zinhlelo ziholela ku-DEC kanye / noma ku-AEC.
Ubuhle obamukelekayo boqeqesho olunikezwa eTeccart Institute lususelwa ekuqeqeshweni kwezobuchwepheshe okusebenzayo, kuhlanganiswe nemfundo ejwayelekile eguqulwe indlela ethembisayo yempumelelo kanye nokuhlanganiswa kwezemfundo.
ITeccart CollegeOlunye ulwazi
Izinga lesiNgisi le-BLI 8 noma i-BLI French level 8
Imisebenzi engaba khona
- Umklami wezithombe ekushicileleni
- Uchwepheshe wangaphambi kokuphrinta
- Umklami wezithombe
- Isakhiwo sochwepheshe
- Umdali wewebhusayithi
- Uchwepheshe emahhovisi enkonzo
- Umsebenzi ozisebenzelayo
Abaqashi abangaba khona
- Ama-studio wokuqamba imidwebo
- Ama-ejensi wokukhangisa
- Izinkampani Ukushicilela
(abashicileli bamaphephandaba, omagazini, bezincwadi)
- Ukuphrinta izitshalo nezikhungo zokuphrinta kwedijithali
- Izimboni zemultimedia
- Izinkampani ezahlukahlukene ezizimele
- Amathuba amahle okuqashwa
- Ithuba lokwethula inkampani yakho noma ube yisisebenzi esizimele
Izidingo zemakethe zomsebenzi
- Ukuzimela kanye nomqondo wenhlangano
- Amandla okuhlangabezana nezinsuku zokugcina nezokumelana nengcindezi
- Minuteness kanye ukunakwa imininingwane
- Ulwazi lwekhompyutha
- Umuzwa wokubuka
- Umqondo ovulekile nomqondo wokudala
- Amandla wokwamukela ukugxekwa
- Amandla okusebenza endaweni yeqembu
Imisebenzi esemqoka yochwepheshe bezogesi abasebenza ngezimboni ukuxazulula izinkinga, ukugcinwa kokuvinjwa, ukufakwa kanye nokufakwa kwemishini ezinhlelweni zokulawula inqubo. Ngokubambisana nonjiniyela, nabo bayabandakanyeka ekwakhiweni noma ekushintsheni kwezinhlelo ezizisebenzelayo noma ekufakweni kukagesi. Banesibopho sokuthengwa kwemishini ngaphakathi kwemikhawulo yesabelomali.
Bheka ukusebenza kwamathuluzi amakhulu namadivayisi asetshenziselwa ukulawula nokuzenzakalelayo kwezinqubo zezimboni bese wenza ukucabanga, ukulungisa nokuhlela; dweba imidwebo kumazinga embonini, aguqule futhi azibambe iqhaza ekwakhiweni kwezinhlelo zokuzenzakalela; faka, Xazulula inkinga, ulungisa futhi ugcine izinsiza ngokuphepha nezinhlelo zezimboni zokukhiqiza, ezokuhambisa, zokuhambisa, zokulawula amandla kagesi nokuguqulwa kwazo zibe yindawo yokushayela, kanye nezohlobo lwe-elekthronikhi, lwe-pneumatic, lwe-hydraulic noma lwe-elekthronikhi elisetshenziselwa ukukala, ukulawula nokusebenzisa i-automation izinqubo.
Uhlelo lweComputer Management luhlose ukuqeqesha abafundi ukuthi bazilolongele nomsebenzi wokuhlaziya umhlaziyi wezinhlelo emkhakheni wezokuphatha.
Ekwenzeni umsebenzi wakhe, umhlaziyi wohlelo ubhekana nezimo ezintsha ezivela esimweni semisebenzi yohlobo lwemvelo ye-IT, amasiko kanye nemikhuba yebhizinisi, njll. Ngakho-ke, kufanele akhombise ukuzivumelanisa nezimo, amakhono okufunda nokuxazulula izinkinga.
Ngaphezu kwalokho, ukuhlaziya kanye nomsebenzi wokuhlela kudinga ikakhulukazi umoya we-logic, ukuhlaziywa nokuhlanganiswa. Ubuye futhi akhombise ukuzimela, ubuhlakani, ukukhuthazela kanye nelukuluku lentuthuko enkulu kwezobuchwepheshe.
Akusho ukuthi inhlangano esebenza ngendlela yamaphrojekthi, ikakhulukazi kumodeli yamakhompiyutha ekhethwayo idinga ukuthi umhlaziyi wohlelo ahlole amakhono ahlobene nokuxhumana, ukusebenzisana namakhono okusebenzisana nabanye.
Umhlaziyi we-Programmer kumele ahlangabezane nezidingo zezinkampani ezinemisebenzi ehlukahlukene. Angasebenzela izinkampani ezineminyango ye-IT yazo ekhiqiza isoftware noma enikezela ngezinsizakalo ze-IT. Ukuthuthukiswa kwezicelo ezihlangabezana nezidingo zamabhizinisi amancane, aphakathi namakhulu ekukhuleni kusengomunye wabasebenzisi abakhulu kakhulu babahlaziyi bohlelo lwezinsizakalo. Kodwa-ke, ngenxa yokuvulwa kwezimakethe, ukuqhamuka njalo kobuchwepheshe obusha kanye nokubaluleka okukhulayo kwemininingwane nokuxhumana, le ndawo inezinguquko ezinkulu. Zikhonjiswa ikakhulukazi ngokwandisa ukwehluka futhi, ngenxa yalokho, isidingo esikhulu kakhulu semikhiqizo emisha. Le mikhiqizo emisha ifaka izinhlelo zokuxhumana njengemisebenzi yokusebenza kweqembu (inkampani yangaphakathi), izinhlelo zokusebenza ezivumela ukushintshaniswa kwedatha (inkampani ephakathi) kanye nokusatshalaliswa komgwaqo uLwazi Highway ngezinhloso ezahlukahlukene, ikakhulukazi kwezentengiso. Lezi zinhlelo zokusebenza ezintsha zinezici ezihlukile: ubungani, ukuxhumana nemultimedia. Umhlaziyi wohlelo kulindeleke ukuthi afake isandla ngokwengeziwe ekuthuthukiseni izinhlelo zekhompyutha ezifaka lezi zici.
Imisebenzi eyenziwa umhlaziyi wohlelo angakwazi:
ziyahlukahluka ngokuya ngezimpawu zenkampani ezinje ngohlobo lwebhizinisi lazo nosayizi wazo, njengoba amabhizinisi amaningi emincane noma ephakathi nendawo, umhlaziyi wohlelo kufanele abe nezindlela eziguquguqukayo;
ukubhekana nanoma isiphi isigaba somjikelezo wokuthuthukiswa kwesicelo, okungukuthi, ukuhlaziya nokuklama, ukuqalisa nokuhlola kanye nokufakwa nokuhlanganiswa endaweni yekhompiyutha okuhloswe ngayo. Ukukhiqizwa kwemibhalo kanye nokuqeqeshwa kwabasebenzisi nakho kuyingxenye yemisebenzi yabahlaziyi bohlelo;
gcina isoftware ekhona ngokuletha ukuthuthukiswa kokusebenza. Usebenza futhi njengochwepheshe nabasebenzisi;
yenza imisebenzi ehlobene nokusebenza kwezimo zekhompiyutha ezifana nokufakwa nokucushwa kwehadiwe, imisebenzi yokuphatha elula kunethiwekhi yesilinganiso esilinganiselwe nemisebenzi yokuxhasa yezobuchwepheshe.
Abathweswe iziqu kwezokuxhumana batholakala kakhulu phakathi kwabakhiqizi bemishini yezokuxhumana, izinkampani ezinikezela ngezinsizakalo zokuxhumana ngocingo, ithelevishini yethelevishini, kanye nemikhiqizo yokuxhumana ethengisa kanye nokuthengisa. Imisebenzi esemqoka yalaba buchwepheshe ukwenza ukufakwa, ukuvivinya, ukulungisa kanye nokulungisa imishini yomhlaba wezokwaziswa nezokuxhumana. Ezimweni eziningi, bazosebenza nosizo lobuchwepheshe nokumelwa.
Ochwepheshe bobuchwepheshe kulo mkhakha kumele bafake futhi balungiselele amanethiwekhi we-IP NE-VOIP, badwebe imidwebo bese benza idivaysi besebenzisa ubuchwepheshe bezimboni. Faka, gcina futhi ushintshe imishini ye-elekthronikhi esetshenziselwa ukuthutha, ukupakisha noma ukuguqula i-analog noma amasiginali edijithali asetshenziswa kakhulu emkhakheni wezokuxhumana. Thola bese uxazulula izinkinga zokuxhumana ngocingo ezindaweni ezihamba ngamanethiwekhi e-IP (DOCSIS ADSL) usebenzisa izinsiza ezikhethekile ezifanele. Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo luzovumela umfundi ukuthi athole amakhono adingekayo ukulungiselela i-CCNA ne-CVOICE Cisco.
ICOPUTER NETWORKS management
Indlela yokukhethekile ukuphathwa kwamanethiwekhi weKhompiyutha ihlose ukuqeqesha abafundi ukwenza umsebenzi wobuphathi kumanethiwekhi wekhompyutha.
Ekupheleni kokuqeqeshwa kwakhe, umphathi wenethiwekhi uzokwazi ukusebenzisa indlela ye-algorithmic, ukuhlaziya ukwakhiwa kwenethiwekhi yamakhompiyutha, ukukhetha izinto ezibonakalayo, nokwandisa ukusebenza kohlelo lokusebenzela lwesikhungo sokusebenzela, ukuqinisekisa ukuphepha zezinto ezibonakalayo nezengqondo zenethiwekhi yekhompyutha ukuphatha imishini yokusebenza kwamakhompiyutha, ukubheka ukusebenza kwenethiwekhi yamakhompiyutha, ukukhetha isoftware, ukuphatha isikhathi sakhe kanye nekhwalithi yomsebenzi wakhe wokuqinisekisa ikhasimende lokusekelwa kwamakhompyutha, ukuqinisekisa ukuvela kwenethiwekhi yekhompyutha ukuthuthukisa izinsiza, ukuxilonga nokuxazulula inkinga kwenethiwekhi yekhompyutha ukufaka i-server; ukusebenzisa ubuchwepheshe nezinsizakalo ezithile kwi-Intanethi; ukuhlela ukufakwa kwenethiwekhi yekhompyutha ukusebenzisa inethiwekhi yekhompyutha ukuphatha inethiwekhi yekhompyutha.
DESIGN YOKUPHAKATHI KWE-3D
Lolu hlelo lulungiselela abafundi umsebenzi we-3D wekhompiyutha yehluzo ze-computer kanye nehluzo zekhompyutha. Abantu laba basebenza kakhulu kuma-studio ezithombe ezenziwa ngabasebenza ngekhompiyutha (isici esifushane neside) nezinkundla zethelevishini kanye nezinkampani ezisebenza ngokukhiqiza ama-multimedia, imidlalo ye-elekthronikhi, ukwenziwa kabusha kwezinto kanye nemiphumela ekhethekile. Zitholakala nakumafemu wokuqamba wezimboni naphakathi kwabakhiqizi be-software nasemkhakheni ohlukene njengomuthi, i-geomatics, i-aerospace nemfashini ephezulu.
Abaqambi bezithombe eziqeshini ze-3D nemidwebo yekhompyutha kuqala bahlaziye izici zephrojekthi ezithunyelwe kubo. Bona-ke bakhiqiza uhlobo lokugqwayiza, basebenzise imodeli yokuqhafaza (izinhlamvu, izinto nendawo ezungezile), basebenzise ukwakheka nemibala, bamise izibani, ihluzo ezigqwayiziweyo, futhi bahlanganyele ekuthuthukisweni kokugqwayiza kokugcina ukwenziwa kwezithombe. Bangakha nemiphumela yokubuka yedijithali futhi benze ukuhlanganisa (ukwenza).
Umsebenzi wongcweti kokugqwayiza kwe-3D ne-CGI kufaka phakathi ukuthuthukiswa kokuqamba, ubuciko bokubonwayo nokuqina ezindleleni zomsebenzi, kanye nolwazi lobuchwepheshe bokuhamba nokulawula namathuluzi wokukhiqiza wendabuko kanye nekhompyutha.Uchwepheshe wezithombe ze-3D ubizwa ukudala izithombe kanye nemodeli engasetshenziselwa izinhlelo zokusebenza ezisebenzayo nemikhiqizo evelayo. Umuntu othweswe iziqu ku-3D animation and synthesis image uyakwazi ukuhlanganisa iqembu elinamacala amaningi. Kungadingeka ukusebenza ezindaweni ezinjengemidlalo yamavidiyo, i-multimedia exhumana, ukukhiqizwa kwangemva kwemiphumela kanye nemiphumela ekhethekile esetshenziswa emkhakheni wokukhangisa, ithelevishini, ifilimu nezobuciko. Ngaphezu kwalokho, angaqashwa embonini yemikhakha yezobuciko esetshenziswa ezindaweni ezinjengokwakhiwa kwezakhiwo, ukwakhiwa kwezimboni, ukucabanga ngemithi yezokwelapha, izindiza zokuhamba ngezindiza nokuzula kanye nokuqeqeshwa.
Umuntu othweswe iziqu ku-3D animation nesithombe synthesis uhlaziya izici zephrojekthi, athuthukise umqondo nendaba ebhaliwe. Ufanekisa izinto, izindawo nezinhlamvu kanye nezithombe. Okokugcina, kusebenzisa izithombe nokulandelana kokwenza izithombe bese kufaka konke ekukhiqizeni kwe-3D.
Umuntu othweswe iziqu kuhluzo lwe-3D kanye nehluzo zekhompyutha athuthukise umbono wawo nomqondo wokubukwa. Uqamba futhi wenza ubuciko ekuklanyweni kwamaphrojekthi. Uqinile ezindleleni zakhona zokusebenzela, uvulekile ukugxekwa futhi uzimele. Unolwazi olufanele lomnyakazo namandla okuhumusha ukulandelana kwezimpawu. Ufundile amasu namathuluzi wokwenza amakhompyutha. Uqapha isizinda sezobuchwepheshe ukugcina ulwazi lusha. Unamandla okusebenza nabanye ukuze basebenzise futhi basebenzise izinto ezahlukahlukene zokukhiqizwa kwe-3D futhi bazihlanganise zibe yinhlanganisela ephelele.
Ekugcineni, iziqu ze-3D izithombe nokwenziwa komfanekiso kukhombisa umoya obucayi futhi ukhombisa ukuhlaziya, ukuhumusha nokuhlola umthamo. Uyakwazi ukuqhathanisa, ukwenza ukuxhumana, ukuhlangana nokuxazulula izinkinga nokuphakamisa ezinye izindlela. Ukhuluma ngokufunda kahle isiFulentshi esibhaliwe nolukhulunywayo, futhi akhombisa ukuqonda okuhle kolimi lwesiNgisi. Unesiko eliqinile kwezemidiya, ezokuxhumana kanye nezobuciko bebonke, futhi ukhombisa umuzwa wokuziphatha okuhle, ukuphendula nokuvuleleka emhlabeni.
UKUFAKA KWAMAKHAYA | I-AEC | Amahora angama-1500
Imakethi Yezemfashini iyingxenye ebalulekile yomnotho waseCanada futhi ivula indlela yamathuba amaningi emisebenzi noma ngabe lokho ukuthenga izinto zemfashini, ukuthuthukiswa komkhiqizo, ukuthengisa, ukuphatha ukuthengisa, ukusebenza, ibhizinisi, ukuhlela noma ukuxhaswa kokuthengisa.
Uhlelo lweMfashini Yezentengiso lwenzelwe ukuqeqesha ochwepheshe abenzelwe ukuphathwa kwebhizinisi, ukuthengisa kanye nokwakha umkhiqizo. Ukuqeqeshwa kugxile ekuthuthukisweni kwamakhono ahlobene nomkhakha wezemfashini, amakhono okusebenzisana, ubuholi, ukuvumelana nezimo kanye nokuthuthukiswa kwezindlela zokuziphatha ezifanele.
Leli kolishi licela abafundi ukuthi balukhulume kahle ulimi lwemboni. Isakhiwo sohlelo sikhulu ukuthi umfundi ahlole futhi ahlaziye imibono emisha, afunde ukwakheka kokuthengiswa kwemfashini futhi afunde ukuphatha nokusabalalisa imikhiqizo yezemfashini.
ISIQINISEKISO SE-INTERIOR | I-AEC | Izinyanga eziyi-19 (kufaka phakathi i-internship)
Idizayini engaphakathi iyinsimu yokudala enezinselelo eziningi zobuchwepheshe. Uhlelo lwasekolishi luphelele kubantu abanomqondo omuhle wokuqwashisa ngobuhle obuzwakalayo ekusetshenzisweni kwezindawo ezakhiwe. Ngenkathi befunda izici ezihlukile zesiyalo, abafundi bakhulisa amakhono namakhono obuciko ukuze bakwazi ukuhlanganisa wonke amaphrojekthi, kungaba okuhlala noma okuthengiswayo. Lolu hlelo futhi luhlinzeka ngezifundo kwi-AutoCAD kanye ne-3D Studio Max (idizayini yokusiza ikhompyutha) ukuze izitshudeni zikuhlomele kahle ukubhekana nentuthuko yezobuchwepheshe embonini. Isikole sethu sithuthukisa amakhono namakhono abafundi azo zonke izici zokwakheka kwezangaphakathi.
Ekupheleni kwesifundo, abafundi bazokwazi ukuqonda izidingo zeklayenti ekuhleleni isikhala sendawo engaphakathi, izixazululo zomklamo, ukudweba kanye nokuhlela isikhala ngaphakathi esakhelwe ngokwezixazululo ezikhethiwe nangokuhambisana namakhodi, ukweluleka ngokukhethwa imibala, izinto zokwakha, ifenisha futhi uqinisekise ukwenziwa kwephrojekthi ngokwezinhlelo nokubekiwe.
Umkhakha wezemfashini uyinsimu edinga ukubona ubuhle. Abaqambi kumele babe nomqondo ojulile we-aesthetics futhi bahloniphe imithetho yemakethe. Isikole sethu sinikezela ngohlelo lwasekolishi ekwakhiweni kwemfashini olwenza abafundi bakwazi ukuthuthukisa amakhono abo kwezobuciko nawobuchwepheshe ngomsebenzi abawenzayo embonini enamandla nesezingeni eliphakeme. Ngaphezu kokuthuthukisa isitayela sakhe, uqeqesho luzonikeza iziqu ithuba lokuhlaziya kanye nokutolika izindlela zokwenza izitayela ezintsha. Uhlelo lolu lufaka nezifundo ku-PAD System, Photoshop ne-Illustrator software ne-Design Click kumamojula, okuvumela umfundi ukuthi asebenze nobuchwepheshe bokuqamba imfashini. Inhloso yohlelo lokuklama imfashini ukuqeqesha abaklami bemfashini yabesifazane indima yabo ukuklama izingubo ezisezingeni eliphezulu nokwakha izitayela noma ukwakheka kwezingubo okubonisa izitayela zemfashini kanye nezidingo zezimakethe ezahlukahlukene. Umqambi wemfashini kufanele enze ucwaningo ezintweni ezisetshenziswayo, engamele ukuqaliswa kokusetshenziswa kwephethini nokwenziwa kwama-prototypes futhi aqinisekise intuthuko.
Uhlelo luhlose ukufeza izinhloso ezilandelayo:
Ukwenza umfundi azimele ekusebenzeni kwemisebenzi yomsebenzi ephathelene nokuqeqeshwa ekwakheni imfashini;
Ugqugquzele ukuhlanganiswa komfundi ngaphakathi kwenkampani ngokuya nge-career ekhethiwe nokuthi, ngokuya ngolwazi namakhono akhonjisiwe;
Khuthaza ukuthuthukiswa komfundi ngokuya ngezidingo nezidingo embonini yezingubo;
Yenza umuntu abe nekhono ekwenzeni umsebenzi wakhe, okungukuthi ukusho ukumvumela, ngoba ukuhlanganiswa kwakhe emakethe yezabasebenzi nasekwenzeni amandla adingekayo, ukwenza imisebenzi nokwenza imisebenzi ehlobene nomsebenzi lowo;
Ukugqugquzela ukuhlanganiswa komuntu empilweni yokusebenza, okubandakanya ulwazi lwemakethe yezabasebenzi kanye nolwazi lwesimo lapho enza umsebenzi wabo awukhethile;
Ukugqugquzela ukuthuthukiswa kanye nokwanda kwezinga lobuciko kumuntu;
Khuthaza ukuhamba komuntu okuhle ngokumvumela ukuthi ahlinzeke izinsizakusebenza ukuze enze kahle umsebenzi wakhe, kubandakanya nokuqwashisa ngebhizinisi lakhe.
Uhlelo lweParlegal Technology lifundisa abafundi ukuthi basebenze kanjani ngamaphepha asemthethweni, imithetho nemithetho yocwaningo lwamakhompiyutha, kanye nomthetho wamacala nemfundiso.
Ochwepheshe kanye nama-paralegals bahlaziya futhi bahumushe imibhalo ehlukahlukene yezomthetho futhi bahlanganyele ekubumbeni izinqubo noma kumadokhumenti ekucutshungweni kwamafayela. Lokhu kudinga ulwazi nobuchwepheshe ezindaweni ezahlukahlukene zombili ezinomthetho wokuphikisana njengomthetho we-notarial, izinqubo nezinqubo zokubhala, izindlela zokucwaninga nokusetshenziswa kwemininingwane kanye nesoftware esetshenziswe emkhakheni wezolimo.
Uhlelo lolu futhi lulungiselela izitshudeni imisebenzi ezifaka:
ukuvula nokubheka amarekhodi, ukuqapha ama-akhawunti amaklayenti, ukulungiswa kanye nentela yezindleko zezindleko, ukuphathwa kwama-akhawunti ama-trust, ukulungiswa kwamacala okulalelwa, iholide enkantolo, ukufunwa kwesihloko, ukuqoqwa kwenhlawulo, i-alimony, ukubhala kwemizuzu yabalaleli Ekugcineni ulwazi nobuchwepheshe ezinqubweni ezisebenzayo kanye nomthetho kwezentengiso nezomthetho ezinkampani nomthetho wokuphatha.
Uthisha onakekela izingane usebenza nezingane ezineminyaka ephakathi kuka-0 no-12. Lapho nje ehlangana nendawo asebenza kuyo, ubizwa ukuba ahlangabeze izidingo eziyisisekelo zengane. Ukwenza lokhu, kufanele aqinisekise ukuphepha kwengane, ahlole izidingo zengane (inhlanzeko, ukunethezeka, ukulala, ukondleka), anikeze ukunakekelwa okufanele futhi ahlole ukubaluleka kokungenelela okuhlinzekiwe.
Ngaphezu kokuhlangabezana nezidingo eziyisisekelo, ofundisa izingane kufanele ahlangabezane nezidingo zengqondo nezemfundo zengane. Ukuze enze lokhu, kufanele akhe ubuhlobo obuhle naye. Kufanele agcine isimo sezulu esivumayo ekukhuleni kwengane neqembu ngokungenelela okuhlobene nokuziphatha komuntu ngamunye noma kwenhlanganyelo.
Ekugcineni, uthisha kumele enze indawo yokuhlala ekhuthaza ukukhula kwengqondo kwengqondo, ukuqonda, ulimi, ukukhula kwezenhlalo-ngokomzwelo nokuziphatha. Ukuze enze lokhu, kufanele aklame, ahlele, enze lula futhi ahlole imisebenzi yansuku zonke ehambelana nezidingo ezithile zamakhasimende.
Udokotela ojwayelekile osebenza ezinsizakalweni zokunakekela izingane uzokwazi ukwenza umsebenzi wakhe nawo wonke amaklayenti okunakekela izingane eQuebec, kuzo zonke izinhlobo zezinsizakalo zokunakekela izingane. Uzoqeqeshwa ukwenza yonke imisebenzi yansuku zonke edingekayo ukufeza izidingo zezingane.
Uqede ngempumelelo i-BLI English level 8 noma i-BLI level 8
Ubufakazi bezinga lolimi (Izinga le-BLI noma ukuhlolwa okusemthethweni)